အင်တာနက်ကိုတဆင့်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တီဗီကြည့်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဆိုပါဗီဒီယိုကဒ် 10 windose သိသိသာသာ Padania စွမ်းဆောင်ရည် overheated သည့်အခါဖြစ်ပေါ်သောအရေးအပါဆုံးနှင့်စျေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ထိုစဉ်ဆက်မပြတ်အပူကိရိယာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာအစားထိုးလိုအပ်, ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်။ အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကိုရှောင်ရှားရန်, ကအပူချိန်ကိုစစ်ဆေးတစ်ခါတစ်ရံလိုအပ်ပေသည်။ ဒါဟာဒီအဆက်အသွယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဤဆောင်းပါး၏သင်တန်းတွင်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
Windows 10 ကိုဗီဒီယိုကဒ်အပူချိန်ကိုလေ့လာပါ
ကို default operating system ကိုကို Windows 10, အဖြစ်အားလုံးယခင်ဗားရှင်းကဂရပ်ဖစ်ကဒ်အပါအဝင်အစိတ်အပိုင်းများ၏အပူချိန်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းမပေးပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲဖို့မဆိုအထူးကျွမ်းကျင်မှုမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့ third-party အစီအစဉ်များကိုသုံးစွဲဖို့ဒီလိုအပ်ချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဆော့ဖ်ဝဲအများကြီးအခြား OS ဗားရှင်းအပေါ်အပြေးသငျသညျအစကအခြားအစိတ်အပိုင်းများ၏အပူချိန်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရယူခွင့်ပြု။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မှာ Windows 10 မှာ Processor ကို၏အပူချိန်ကိုထွက်ရှာတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို
Option ကို 1: AIDA64
AIDA64 - ထို operating system ကိုထဲကကွန်ပျူတာရှာဖွေရေးမှာရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု။ ဖြစ်နိုင်လျှင်ဒီဆော့ဗ်ဝဲကို install လုပ်ပေးတစ်ခုချင်းစီအစိတ်အပိုင်းနှင့်အပူချိန်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များပေးပါသည်။ အပူအဆင့်လက်ပ်တော့များတွင် embedded အဖြစ်ဂရပ်ဖစ်များနှင့် discrete တွက်ချက်ဖို့ကလည်းတတ်နိုင်သမျှအတူ။
AIDA64 ကို download လုပ်ပါ
အထက်ထောက်ပံ့ link ကိုနှိပ်ပါ, ကွန်ပျူတာထဲမှာ software ကို download လုပ်ပါကထည့်သွင်းပါ။ ဖြန့်ချိသင်ရွေးချယ်ထားသောတန်ဖိုးထား, ရှိသမျှကိစ္စများတွင်, အပူချိန်သတင်းအချက်အလက်တန်းတူတိနှင့်အတူပြသနေသည်မဟုတ်ပါဘူး။
program ကို run ဖို့ go "ကွန်ပျူတာ" နှင့်ကို select "အာရုံခံ".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: AIDA64 သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
တစ်ဦးချင်းစီအစိတ်အပိုင်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မဆံ့မည်ကိုစာမကျြနှာတှငျ။ တပ်မက်လိုချင်သောအဂရပ်ဖစ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အစုတန်ဖိုးကိုတစ်ဦးလက်မှတ်အားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည် "Diode မိသားစုဆရာဝန်".
ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးထက်ပိုသောဗီဒီယိုကဒ်၏ရှေ့မှောက်တွင်၏ဥပမာ, မှတ်စုစာအုပ်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်တစ်ဦးထက်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာအချို့မော်ဒယ်များပြသမည်မဟုတ်ပါ။
မြင်နိုင်ပါသည်အမျှ AIDA64 မသက်ဆိုင်အမျိုးအစားဗီဒီယိုကဒ်၏အပူချိန်ကိုတိုင်းတာရန်လွယ်ကူစေသည်။ များသောအားဖြင့်ယင်းအစီအစဉ်ကိုလုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
Option ကို 2: HWMonitor
HWMonitor မဟုတ်ဘဲ AIDA64 သည်ထက်, တစ်ဖွဲ့လုံးက interface နဲ့အလေးချိန်၏စည်းကမ်းချက်များကိုပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်။ သို့သော်သာသတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်ကြီးနှင့်ဗီဒီယိုကဒ်။
HWMonitor ကို download လုပ်ပါ
Install လုပ်ပြီး program ကို run ။ အပူချိန်သတင်းအချက်အလက်အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်တင်ပြပါလိမ့်မည်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုရွှေ့ဖို့ရှိပါတယ်မလိုအပ်ပါဘူး။
ယင်းယူနစ်၏အပူချိန်နှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူသင့်ရဲ့ဗွီဒီယိုကဒ်၏နာမကိုအမှီချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပုဒ်မခွဲအားဖြင့်ထိုအတူလုပ်ဖို့ "အပူချိန်"။ ဒါဟာတိုင်းတာခြင်း၏အချိန်မှာ GPU ကို၏အပူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိကြောင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: HWMonitor သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
အဆိုပါပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, သို့မှသာသင်သည်မည်သည့်ပြဿနာများမရှိဘဲအလိုရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် AIDA64 ၌ရှိသကဲ့သို့, သင်အမြဲအပူချိန်ခြေရာခံမထားနိုင်ပါ။ အထူးသဖြင့် built-in GPU ကိုလက်တော့ပ်၏အမှု၌။
option 3: Speedfan
ဒီဆော့ဗ်ဝဲလည်းမှုကြောင့်တစ်ဦး capacious ရိုးရှင်းသော interface ကိုသုံးစွဲဖို့အတော်လေးလွယ်ကူသည်, ဒါပေမယ့်, ဒီရှိနေသော်လည်းအားလုံးအာရုံခံကိရိယာမှဖတ်သတင်းအချက်အလက်ပေးသည်။ default Speedfan အင်္ဂလိပ် interface ကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ရုရှ setting တွင်ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ GPU ကို၏အပူအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အိမ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် posted ပါလိမ့်မည် "ညွှန်းကိန်း" သီးခြားပိတ်ပင်တားဆီးမှု၌တည်၏။ အဆိုပါတပ်မက်လိုချင်သောအလိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် "GPU ကို".
ထို့အပြင် program ကိုထောက်ပံ့ "ဇယား"။ သက်ဆိုင်ရာ tab ကိုမှ switching အားဖြင့်၎င်း, select လုပ်ပါ "အပူချိန်" drop-down list ထဲက, သင်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ဒီဂရီအတွင်းတိုးမြင်နိုင်ပါသည်။
အဓိကစာမျက်နှာကိုပြန်သွားပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "ပြုပြင်"။ ဤတွင် tab ကို "အပူချိန်" အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောဗီဒီယိုကဒ်အပါအဝင်သင့်ကွန်ပျူတာကိုအသီးအသီးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ဒေတာ, ဖြစ်ရလိမ့်မည် "GPU ကို"။ ဤတွင်သတင်းအချက်အလက်များအိမ်စာမျက်နှာထက်အတန်ငယ်ကြီးမားသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Speedfan သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
ဒီဆော့ဗ်ဝဲအပူချိန်စောင့်ကြည့်ဖို့မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတစ်ဦးချင်းစီ set ကိုအေး၏အမြန်နှုန်းကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းများကိုယခင်တဦးတည်းအနေနဲ့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။
Option ကို 4: Piriform Speccy
Piriform Speccy အစီအစဉ်ကိုယခင်ကဆွေးနွေးတင်ပြအများစုကဲ့သို့ capacious မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကိုအနည်းဆုံးသောကွောငျ့ CCleaner ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီဖြန့်ချိဆိုတဲ့အချက်ကို၏အာရုံကိုထိုက်တန်ပါတယ်။ လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုကွဲပြားခြားနားသောယေဘုယျသိကောင်းစရာများနှင့်အတူတစ်ချိန်ကနှစ်ခုကဏ္ဍများမှာကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။
ချက်ချင်းအစီအစဉ်စတင်ပြီးနောက်ဗီဒီယိုကဒ်၏အပူချိန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်အဓိကစာမျက်နှာပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် "ဂရစ်ဖစ်"။ ဒါဟာအစဗီဒီယိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်မှတ်ဉာဏ်မော်ဒယ်ပြပေးလိမ့်မယ်။
အသေးစိတ်နဲ့ tab ပေါ်မှာတည်ရှိနေကြတယ် "ဂရစ်ဖစ်"သင် Menu ထဲမှာသင့်တော်တဲ့ item ကို select ပါ။ လိုင်းအတွက်ဤသတင်းအချက်အလက်ပြသ, သာအချို့ပစ္စည်းတွေအပူကဆုံးဖြတ် "အပူချိန်".
မျှော်လင့်ခြင်း, Speccy ကိုသင်အသုံးဝင်သောခဲ့, သင်ကဗီဒီယိုကဒ်၏အပူချိန်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်များသိစေပါလိမ့်မယ်။
Option ကို 5: ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုများအတွက်အပိုဆောင်း option ကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက် Windows ကို 10 ကနေဖျက်ပစ် default အနေဖြင့်အဆိုပါပစ္စည်းတွေနဲ့ Widgets တွေဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်သူတို့က website တွင်သီးခြားကြေညာချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့တာကိုသီးခြားလွတ်လပ်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအဖြစ်ပြန်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကိုဗီဒီယိုကဒ်အပူချိန်အတော်လေးလူကြိုက်များ gadget ကကူညီပေးပါမည် Learn "GPU ကိုစောင့်ကြည့်".
ဒေါင်းလုဒ် GPU ကို Monitor gadget ကကိုသွားပါ
Read more: အဘယ်သို့ငါက Windows 10 ရက်နေ့တွင် gadgets ကို install ပါဘူး
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဥပမာ CPU ကိုအပူချိန်, BIOS ထဲတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်, သော်လည်း, ပုံမှန်အားဖြင့် system ကိုဗီဒီယိုကဒ်အပူချိန်ကြည့်ရှုဘို့ tools တွေကိုပေးမထားဘူး။ ကျနော်တို့အများဆုံးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေအစီအစဉ်အားလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားကြနှင့်ဤဆောင်းပါးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။